डिजिटल मार्केटिङका ​​फाइदाहरू - Victor Mochere
by शिव गुप्ता
डिजिटल मार्केटिङ भनेको उपभोक्ताहरूलाई डिजिटल रूपमा पुग्न इन्टरनेटको उत्तम प्रयोग हो। यो सबैभन्दा रोमाञ्चक उपकरणहरू मध्ये एक हो जुन मार्केटरले यसको अनलाइन उपस्थिति बढाउन प्रयोग गर्न सक्छ। यो परम्परागत मार्केटिङलाई पछाडि छोडेर मार्केटिङको भविष्य बन्न गइरहेको छ। यो डिजिटल माध्यमहरू मार्फत तपाईंको ब्रान्ड वा उत्पादन/सेवाहरूमा जागरूकता र विश्वास बढाउने तरिका हो।
अहिले, विश्वभरका धेरै ठूला कम्पनीहरूले इजिटल मार्केटिङ प्लेटफर्महरूमा लगानी गरेका छन्। आजकल, अनलाइन उपस्थिति नहुनु बढ्दो व्यवसायहरूको लागि खराब सम्झौता हो। एक कम्पनीले धेरै उत्कृष्ट अवसरहरू र विचारहरू गुमाउन सक्छ जुन अनलाइन संसारमा मात्र उपलब्ध छ।
यहाँ डिजिटल मार्केटिङका ​​केही फाइदाहरू छन्।
1. राम्रो पहुँच
2. इन्टरनेट सधैं खुला छ
3. साना व्यवसायहरूको लागि ब्रान्ड जागरूकतामा वृद्धि
4. आफ्नो व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय लिनुहोस्
5. आदर्श दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न सक्छ
आजकल, विश्वभरि धेरै मानिसहरू इन्टरनेट ब्राउज गरेर र तपाईंको उत्पादनहरू खोज्दै आफ्नो समय खर्च गरिरहेका छन्। धेरै व्यक्तिहरूले पसलबाट खरिद गर्नु अघि अनलाइन खोजी गर्न आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, डिजिटल मार्केटिङ भनेको सही समयमा सही मानिसहरूमा पुग्ने कुरा हो यस प्रक्रियामा, भुक्तानी प्रति क्लिक मार्केटिङ, सोशल मिडिया मार्केटिङ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, कन्टेन्ट मार्केटिङ, र तपाईंको अनलाइन उपस्थितिलाई अधिकतम बनाउनमा थप मद्दत।
इन्टरनेट तपाइँको दर्शकहरु को लागी 24/7 उपलब्ध छ। तिनीहरूले तपाइँको साइट पहुँच गर्न सक्छन् जब तिनीहरू यसलाई पहुँच गर्न र तपाइँको व्यवसाय बारे जान्न चाहन्छन्। यो तपाईंको व्यवसायको लागि एक प्लस पोइन्ट हो किनभने तपाईंको कम्पनी सधैं उपलब्ध छ। तिनीहरूले तपाइँको व्यवसाय जाँच गर्न र तपाइँको व्यवसाय नखुले सम्म पर्खनु बिना तपाइँको संगठन र सेवाहरु बारे थप जान्न सक्छन्। यो तपाईंको व्यवसायको लागि लाभदायक छ किनभने प्रत्येक ग्राहकको काम, निद्रा, र सामाजिक तालिकाहरू फरक हुन्छन्।
डिजिटल मार्केटिङ व्यवसायहरूको लागि राम्रो भाग्य हो। ठूला कम्पनीहरूले डिजिटल मार्केटिङ प्रयोग गर्छन् ताकि उनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा खडा हुन सक्छन्। आजका मानिसहरूले ब्रान्डको अनलाइन उपस्थितिलाई ब्रान्डको विश्वासयोग्यताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक मान्छन्। मानिसहरूले तपाइँको ब्रान्डलाई चिन्न थाल्छन्, जब तपाइँ उनीहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेको कुरा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, बिस्तारै तपाइँको ब्रान्डको प्रतिष्ठा बढ्दै जान्छ। त्यसैगरी, साना व्यवसायहरूले बजारमा अगाडि बढ्न र ठूला कम्पनीहरूमा ब्रान्ड जागरूकता सिर्जना गर्न अनलाइन मार्केटिङ प्रयोग गर्छन्। यसरी, कम्पनीहरूसँग उचित डिजिटल मार्केटिङ रणनीति बिना, उचित ब्रान्डिङ रणनीति हुन सक्दैन।
डिजिटल मार्केटिङको महत्त्व ठूलो रूपमा आउँछ जब यो तपाईंको व्यवसायको विदेशमा पहुँच लिनको लागि आउँछ। डिजिटल मार्केटिङ सेवाहरूको सहयोगमा, तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूसँग काम गर्न र विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न उनीहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको व्यवसायको लागि सही दर्शकहरूमा पुग्नु यस्तो ठूलो अवसर हो। त्यो वास्तवमा डिजिटल मार्केटिंगले पुग्न मद्दत गर्दछ। डिजिटल मार्केटिङले तपाईंलाई थप योग्य ट्राफिक चलाउन मद्दत गर्छ। तपाइँ तपाइँको व्यवसाय मा रुचि राख्ने अधिक लीडहरु मा पुग्छ। विशिष्ट लीडहरू लक्षित गर्ने क्षमताले तपाईंलाई ट्राफिक ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको कम्पनीमा चासो लिन्छ।
इन्टरनेटमा मार्केटिङको महत्त्व कम्पनीहरू र व्यवसायहरूको लागि धेरै उच्च गतिमा बढ्दै छ। तसर्थ, डिजिटल मार्केटिङ धेरै कम्पनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण फोकस भएको छ किनभने तिनीहरू अनलाइन ग्राहकहरूमा पुग्न र उत्पादन बिक्री र सेवाहरू बढाउन चाहन्छन्।